Sina SEBIC 26 mirefy tavy tendrombohitra tiresnow amoron-dranomasina fiara mpamily bisikileta herinaratra sy mpanamboatra | Funncycle
SEBIC 26 mirefy tendrombohitra matavy tiresnow moron-tsambo fiara mpitondra herinaratra bisikileta
26 ″ * 4.0 Tavy matavy anti-slip Wear Resistant Wheel —- Ny kalitao avo lenta anti-slip dia mahazaka terrains samihafa, tsara kokoa noho ny kodiarana 1.75 na 1.95 mahazatra.
Herin'aratra Lithium Battery
Haben'ny kodiarana 26 ″
maotera Brushless, 36V 250W Mid Motor-Bafang M400
Fitaovana amin'ny frame Firaka aluminium
Azo aforitra tsy misy
Max Speed <30km / h, 25km / H na mihoatra
Range isan-kery 31 - 60 km
Anaran'ny marika SEBIKA
Laharana maodely BEF-ID26MF
Manana ny fahaizan'ny mpandeha Seza iray
filanjana 26 * 4.0 ″ firaka aliminioma 6061, lasina TIG
Fork Aluminium 26 ″, lasina TIG
notapahiny Novakivaky kapila Hydraulika
kodiarana INNOVA 26 * 4.0 ″ A / V Mainty
Gear Set 9 hafainganana
Bateria 36V 10.4AH, bateria lithium, miaraka amin'ny charger 2A-SANS
miseho Fampisehoana LCD 5-dingana. Fanombohana Power / 6KM
isan-karazany 30km + isam-bola
Combo napetraka 0
Vakin-tsolosa anoloana sy aoriana —- Ny frein-kapila dia manome hery miato bebe kokoa, freins mandroso amin'ny toe-javatra samihafa.
9 Rafitra fandefasana matihanina haingam-pandeha —– Tazomy ny hafainganam-pandehan'ny pedal tsy misy fangarony na inona na inona gradient na tany misy azy - zavatra tsy zakan'ny fitaovana tokana.
Fork fampiatoana eo alohan'n ——Mahafahanao mitaingina tsipika mahitsy kokoa, manao izay hahazoana aina kokoa ny mitaingina, mitazona ny kodiarana anoloana amin'ny tany manome fikirakirana tsaratsara kokoa, indrindra eo am-panaovana zoro.
Motera haingam-pandeha haingam-pandeha 36V / 250W —— Manome anao hery matanjaka noho ny maotera 36V mahazatra rehefa mananika ny tendrombohitra ianao, manome anao hery hafainganam-pandeha bebe kokoa.
Nohavaozina Smart LCD Display—- Haavo haingam-pandeha 5 hafainganam-pandeha (Hafainganana, Haavo bateria, Mileage, fitaterana fisehoana diso). Aleo mifehy tsara kokoa ny toerana misy anao ary mahazoa valiny fanatanjahan-tena tsara.
36V /10.4Ah batterie capacité be azo esorina —- Ny fahaiza-manao lavitra dia mahatonga azy io ho safidy mety indrindra ho an'ireo mpitaingina hybrid mandeha amin'ny toerana rehetra izay maheno ny antso fitsangatsanganana. (Ny halavany dia miankina amin'ny lanjan'ilay mitaingina, karazana fampiasana, gradient, mari-pana any ivelany sns.)
Teo aloha: SEBIC 26 mirefy malaza amin'ny fomba fanatanjahan-tena an-dàlambe mandeha bisikileta mandeha amin'ny herinaratra mahery
Manaraka: SEBIC 700c môtô afovoan'ny herinaratra mandeha bisikileta an-tanàna
Tyike Fat Ebike
Mpivarotra Ebike Tyro Matavy
Bisikileta Electric Tyro matavy